Apokalypsy 19: 1-21
Rehefa afaka izany, dia nahare hoatra ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra aho nanao hoe: Haleloia! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika;
Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony; fa nitsara ilay vehivavy janga lehibe Izy- dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany- ary namaly azy noho ny ran'ny mpanompony izay nalatsaky ny tànany.
Dia niteny fanindroany ireo hoe: Haleloia! Ary ny setroky ny tanàna dia miakatra mandrakizay mandrakizay.
Ary ny loholona efatra amby roa-polo sy ny zava-manan-aina efatra dia niankohoka nivavaka tamin'Andriamanitra, Izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, ka nanao hoe: Amena; Haleloia!
Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe: Miderà an'Andriamanitsika hianareo mpanompony rehetra, dia hianareo izay matahotra Azy, na ny kely na ny lehibe.
Dia nahare feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka aho, sy tahaka ny firohondrohon'ny rano be, ary tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy nanao hoe: Haleloia! Fa ny Tompo Andriamanitsika, dia ny Tsitoha, no Mpanjaka.
Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra Azy; Fa tonga ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry, ka efa niomana ny vadiny.
Ary hoy koa izy tamiko: Soraty: Sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny Zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko: Ireo dia teny marin'Andriamanitra.
Dia niankohoka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy. Ary hoy izy tamiko: Tandremo, aza manao izao; fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ireo rahalahinao izay mitana ny filazana an'i Jesosy; Andriamanitra ihany no ivavaho; fa ny filazana an'i Jesosy no fanahin'ny faminaniana.
Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjakan'ny tany mbamin'ny miaramilany tafangona mba hiady amin'Ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany.
Ary nosamborina ilay bibidia mbamin'ny mpaminany sandoka, dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany, izay nentiny namitaka ny efa nandray ny sariny; ary dia natsipy velona ho any amin'ny farihy afo mirehitra solifara izy roroa.